The Best Ski Resorts Iji Gaa Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best Ski Resorts Iji Gaa Site Train
E nweghị mma mmetụta karịa ụra na a jiri nwayọọ na-akpụ akpụ ụgbọ okporo ígwè na aza-ututu na ị na-aga, mere nkeji si mkpọda. na Europe, anyị bụ ihe nkwata maka oke mgbe ị na-achọ ụgbọ mmiri Ski kacha mma ileta. Ọ bụghị naanị n'otu ntabi anya njem na-ezi nhọrọ maka skiers, Otú ọ dị. E nwere otu n'usoro nke ntụrụndụ i nwere ike iru site n'ehihie tren njem na njem na, ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, bụ banyere dị ka ngwa ngwa dị ka-efe efe.
Ndị a bụ nhọrọ ụfọdụ n'ime Ski ntụrụndụ kachasị mma iji gaa ụgbọ oloko:
Ski ntụrụndụ ileta ụgbọ okporo ígwè 1 – WENGEN, Switzerland
N'ala ala ndị pụtara ìhè Jungfrau ugwu bụ Wengen, a ọmarịcha Alpine obodo nta dị na Bernese Oberland. Ịbanye n'ime ihe na-ele ka ndị gara aga mgbe na-anọ n'ime obodo. Nke a bụ zuru okè n'ebe ka ụmụaka na ya na ezinụlọ-enyi na enyi obi na-adị na ala-key nightlife. Ọ bụghị n'ime ski? Nsogbu adịghị! Non-skai eme na-agụnye "ụgbọ elu-ahụkwa ụzọ" ji helikọpta, heli-ski, nakwa dị ka 20km nke oyi ụzọ ụkwụ, asatọ curling rinks, na kilomita nke toboggan agbaba.
atọ ntụrụndụ, Grindelwald, Wengen, na Murren, na-kpuchie site Jungfrau mpaghara inwego ngafe. Ọ bụ oge oyi ahụmahụ nrọ!
ụgbọ okporo ígwè: Mgbe ị nwere ike ịga njem site skai okporo ígwè site London St. Pancras na Eurostar ka Wengen enwere ọtụtụ mgbanwe. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na gị na ezinụlọ gị, anyị nwere ike ikwu na-a ụgbọ elu na Bern ma ọ bụ Zurich. site n'ebe, iri a ụgbọ oloko na-njikọ via Bern ka Interlaken Ost na n'ihu na Lauterbrunnen. The ikpeazụ bit nke njem bụ a pụrụ ime eme naanị site okporo ígwè si Lauterbrunnen na-ewe nanị 15 nkeji.
Zurich ka Wengen Ụgbọ oloko
Geneva ka Wengen Ụgbọ oloko
Bern ka Wengen Ụgbọ oloko
Basel ka Wengen Ụgbọ oloko
Ski ntụrụndụ ileta ụgbọ okporo ígwè 2 – ga, Austria
Olee otú anyị pụrụ banyere ski enweghị gụnyere Austria? The SkiWelt region, ọ kachasị, bụ breathtaking! The obodo Soll obụrede mbụre 284km nke skai agbaba dotted na 77 jide Alpine huts na après Ogwe. Enwe a ọṅụṅụ na echiche n'elu Wilder Kaiser ugwu mgbe a n'abalị skai. Ee, ị na-agụ na nri. Enwe ụfọdụ nke ndị fọdụrụ n'ezinụlọ floodlit toboggan agbaba na Europe na Hexenritt na Mond kwa!
Pụọ London St Pancras na 15:04 Eurostar na Brussels, bịarutere 18:05; na- 18:25 ICE si Brussels na Cologne, bịarutere 20:15; ewere ihe 21:21 NightJet sleeper ụgbọ okporo Worgl, bịarutere 08:36; si n'ebe ọ bụ banyere 20 nkeji bọs ma ọ bụ taxi.
Total njem oge: 16 awa 22 nkeji.
Graz ka Worgl Ụgbọ oloko
Salzburg ka Worgl Ụgbọ oloko
Vienna na Worgl Ụgbọ oloko
Cologne ka Worgl Ụgbọ oloko
Anyị ụgbọ okporo ígwè ikpeazụ echiche – Sauze d'Oulx, Italy
Ọ bụrụ na ị na-nwetara na ski, mgbe kacha mma Ski ntụrụndụ gaa ụgbọ okporo ígwè ga- Sauze d'Oulx ebe. Mgbe snow dara ntụ ntụ ubi n'etiti osisi n'ezie abata ha onwe ha. The ikuku n'ime obodo bụ fun na anabata na amara nke ochie cobbled n'okporo ámá n'ezie na-agbakwụnye a mara mma aka na njem.
wezuga London St Pancras na 9.24am Eurostar ruo Paris Nord, ịgbanwe ebe site taxi ma na-2.41pm TGV si Paris-Lyon ka Oulx, rutere 7.23pm. Site n'ebe ahụ, ọ bụ 15 nkeji bọs ma ọ bụ taxi.
Echiche nke eluigwe nke Lac du Bourget, otu n'ime France kasị ukwuu ọdọ mmiri.
Milan ka Oulx Ụgbọ oloko
Turin ka Oulx Ụgbọ oloko
Genoa ka Oulx Ụgbọ oloko
Parma ka Oulx Ụgbọ oloko
Ị na-ama juru n'ọnụ gị akpa? Good! n'ihi na nke ahụ bụ hardest akụkụ nke njem ota. Ntinye akwụkwọ ụgbọ oloko gị ga-mere nkeji, enweghị admin ụgwọ! Gịnị a ụtọ! Gị Save A Train ugbu a na akwụkwọ gị ezumike nke a ndụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fski-resorts-visit-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#skai europeantravel europetravel longtrainjourneys ski snow ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel